Posted by မြရွက်ဝေ at 11:45 AM
မမ မေမေကလည်း လာမေးတဲ့လူတွေကိုကြောလိုက်..သမီးတစ်ယောက်ကောက်ရထားတယ်လို့..ဟိ
နှုတ်ခမ်းနာလေးများဆိုပြီး ပို့စ်ရေးရမလား ဒီကလည်း စဉ်းစားနေတာ.. အိမ်ထောင်တောင်မကျသေးဘဲနဲ့ ဒီက ကလေးမွေးဖို့ပဲ စဉ်းစားနေတော့တာ ဟ ဟ...
Try ပြီးရင်လဲ စည်းကမ်းရိုသေဘို့လိုသေးတယ် ဆရာ။
မွေးပြီးရင် ဒီကဆီကို ပို့လိုက်ပါ။
ကလေးယူပါတော့ဗျို့ ကလေးလေး ယူပါတော့ဗျို့
မီးငယ်--> တော်ကြာ သမီးတောင်းလာကြရင် ဘယ့်နှယ့်လုပ်ရပါ့။ :P
မသုနှင်းဆီ--> ဟုတ်တယ်အမရေ။ ကိုယ့်ဘာသာ အေးဆေးနေနေတာကို။
မဇနိ/ကိုဇနိ--> အဲလိုကြီး အဆင့်ကျော်လို့ရဘူးလေ။ နှုတ်ခမ်းနာနေရင် ဆေးလိမ်းလိုက်ဦးနော်။ တော်ကြာ ညှော်မိနေမယ်။ :D ကလေးကို အပ်ချလောင်း!! ဆိုပြီး ပေါ်လာအောင် မန်းလို့ရရင်လည်း ကောင်းသား။
မKOM--> ဟုတ်တယ် အမဆီပို့ပြီး ၁၂ကြိုးတွေတတ်အောင် သင်ခိုင်းရမယ်။ :D
ပါဘဲ။ ကျွန်တော်တို့တုန်းကတော့ ကိုယ်တွေဘ၀ကိုဘဲ
ဂျပန်မှာကလေးယူရင် မိခင်ကျန်းမာရေးအတွက်စိတ်ချရတာရယ်၊ မွေးစကလေးစောင့်ရှောက်မှုကောင်းတာရယ်၊ မွေးဖွားစားရိတ်ကုန်ကျငွေ(သောင်း၅၀လောက်)ပြန်ရတာရယ်၊ ၀န်ထမ်းတွေဖော်ရွေတာရယ်..ကောင်း
အနာဂတ်plan သေချာဆွဲပြီး ကလေးယူဖို့သင့်တယ်
မမ မီးလည်း မုန့်ဆီကြော် အကြောင်းအခုတလော စဉ်းစားနေမိတယ် :D
ဆရာမုန်းအကြောင်း လာလာဖတ်နေတာ အသစ် မတွေ့လို့။ ဆရာမုန်းအကြောင်း ဆက်တင်ပါဦး
"အသက်အစိတ်မှ ပုခက်မချိတ်ရင် တသက်မနိပ်ဘူး" ဆိုတော့ အမတို့လို အသက် ၂၅ ကို တော်တော်လေး လွန်နေတဲ့သူတွေဆိုရင် ၁၀ သက်မနိပ်ဘူး ဖြစ်သွားမယ်ထင်တယ်နော်.. အဟိ.. :D ညီမလေးပြောထားတာတွေက အရမ်းမှန်တယ်.. အမလည်း မုန့်ဆီကြော်က ဘယ်နေမှန်းမသိဘူး တွေးပူနေတာက များတယ်။ အဓိက ဒီက လူနေမှု စရိုက်ကို သိပ်မကြိုက်တာပေါ့။ အမရဲ့ အမြင်နဲ့လည်း ကွာနေတာလားတော့ မသိဘူးရယ်။ ကောင်မလေးတွေ ဖိုးရိုးဖားယား ကို့ရိုးကားယား မြင်ရင်လည်း စိတ်က ဖြစ်ပါ့မလားပေါ့၊ ယောင်္ကျားလေးတွေ ဖိုသီဖတ်သီနဲ့ နားကွင်းတိုးလို့ တန်းလန်းတွေ မြင်ရတော့ အမလေး ကိုယ့်ကလေးသာ ဒီလိုပုံဆို ဒုက္ခဆိုပြီး တွေးမိပြန်ရော.. အလုပ်က လူတွေကလည်း အားရင် ကလေးယူဖို့ချည်းပြောနေတော့တာပဲ.. စိတ်ညစ်တယ်.. :( သူတို့ ၀ိုင်းထိန်းပေးတာလည်း ဟုတ်ပဲနဲ့.. ;P
he he.. လေးမလည်း အဲလိုပဲ.. ဖြေနေရတယ်...
အောင်မလေးနော် အားကျလိုက်တာ။ အနော်လဲ အမေးခံလိုက်တာဂျာ။ ဒါပေမယ့် အနော်ကောင်မလေးက ဂျပန်မှာ၊ အနော်က စင်ကပူမှာ မလွယ်ရေးချာ မလွယ်သေးပါဂျာ။